ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံများကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်လိင်အကြောင်းလိင်အကြောင်းသင်ပေးသည်။ လက်တွေ့စိတ်ပညာရှင် Robyn Salisbury (၂၀၂၀) - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်порно
စုံတွဲများစွာသည်အမြင်အာရုံကိုလှုံ့ဆော်မှုမှလျင်မြန်စွာနှိုးဆွခြင်းနှင့်အော်ဂဇင်ကိုဖြစ်ပေါ်စေခြင်းမှဖြစ်ပေါ်လာသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာပြproblemsနာများကိုဖြေရှင်းရန်ကူညီပေးခဲ့သည်၊ တစ် ဦး ချင်းအားနှိုးဆွခြင်းသို့မဟုတ်သူတို့၏လိင်ဆက်ဆံမှုဆိုင်ရာလိင်ဆိုင်ရာအော်ဂဇင်ကိုမရောက်ရှိခြင်းကိုကူညီသည်။
ကျွန်ုပ်မှတ်မိသလောက်မှတ်မှတ်ရရတစ်ခုကတော့ ၁၉၆၀ ခုနှစ်ဆင်ခြေဖုံး Stokes ချိုင့်ဝှမ်းမှာကျွန်မတို့အိမ်မှာရေချိုးနေတာပဲ။ Wellington ၏မြောက်ဘက်ရှိ Upper Hutt နှင့် Lower Hutt အကြားရှိတောင်စောင်းများဖုံးလွှမ်းနေသောစိုစွတ်သောရွာငယ်လေးတစ်ရွာရှိသည်။ တစ်ဖက်မှာအသက် ၄ နှစ် ၅ နှစ်အရွယ်ငါပါ၊ နောက်တစ်ဖက်ကအစ်မနဲ့အလယ်ကညီလေးလေးပါ။ ကျွန်တော့်အစ်ကိုကိုလက်ညှိုးထိုးပြီး `` မင်းကအဲ့ဒီအရာနဲ့ကစားခြင်းကိုရပ်တန့်ပြီးခက်ခဲအောင်လုပ်လို့မရဘူးဆိုရင်ပြိုလဲသွားလိမ့်မယ် '' ဟုပြောလိုက်သည်။ ရုတ်တရက်ကျွန်တော့်ကိုဖြစ်ပျက်ခဲ့တယ်၊ ဒါငါ့ရဲ့အဖြစ်အပျက်ပဲ။
နှစ်အနည်းငယ်အကြာမှာကျွန်မကရေချိုးခန်းကုလားထိုင်ပေါ်မှာလဲလျောင်းနေတဲ့ထူးဆန်းပြီးပျံသန်းတဲ့ပန်းကန်ပြားပျံပုံသဏ္objectာန်တစ်ခုကိုတွေ့ရှိခဲ့တယ်။ အမေအားဤကျူးကျော်မှုကိုသတင်းပို့ရန်မီးဖိုချောင်သို့ပြေးသောအခါမိုက်မဲသူဟုမပြောရ။ စင်္ကြံအောက်သို့ပြန်လှည့်ကြည့်သောအခါပျောက်ကွယ်သွားသည်။
နောက်နှစ်အနည်းငယ်လောက်ရှေ့ကိုလှည့်ပါ။ ငါဟာအလယ်အလတ်မှာရှိနေပြီးမိန်းကလေးများညမှာအမေနှင့်အတူမျိုးပွားခြင်းအကြောင်းရုပ်ရှင်ကိုကြည့်နေတယ်။ တစ်နှစ်နှစ်နှစ်လောက်ကြာတော့ကျွန်တော့်အစ်မဟာဆေးကြောသန့်စင်ဆေးကြောတဲ့ဂျွန်ဆင်နဲ့ဂျွန်ဆင်ကထုတ်လုပ်တဲ့ကာလတွေအကြောင်းသူမစာအုပ်ကိုဖတ်ခဲ့တယ်။ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှေးကွေးသူတစ် ဦး အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်ထိုအတွေးအခေါ်နှင့်အဆုံးတွင်ရင်သားများပေါက်ထွက်လာရန်အလွန်တောင့်တသောစိတ်ကူးနှင့်အကျွမ်းတဝင်ရှိရန်အချိန်အနည်းငယ်ရှိခဲ့သည်။ ပဉ္စမပုံစံအရကျွန်တော့်ဇီဝဗေဒဆရာကမျိုးပွားခြင်းအကြောင်းသင်ခန်းစာတစ်ခုတည်းကိုသင်ပေးဖို့သူ့ဇနီးကိုခေါ်သွားတယ်။ သူမရှိတဲ့အချိန်မှာသူကငါတို့အတွက်ဘာလုပ်ပေးနေတယ်ဆိုတာကိုဂရုမစိုက်ဘူး။
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေတွေကိုငါတွေ့တဲ့အခါငါဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာမသိခဲ့ဘူး။ အမေနဲ့အဖေကကျွန်မ ၁၄ နှစ်ကတည်းကသုံးနှစ်ကြာနို့တစ်မျိုးပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပြီးတစ်လပြီးတစ်လအဆင်သင့်ပြင်ဆင်ပေးခဲ့တယ် Playboy နှင့် Penthouse။ စိတ်ရှုပ်ထွေးသော်လည်းတစ်ပြိုင်နက်တည်းစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စရာဖြစ်စဉ်ငါဓာတ်ပုံများရှိမိန်းကလေးများနှင့်မတူ၊ ကျွန်ုပ်သည်ထိုကဲ့သို့လုပ်ဆောင်ရန်ရည်ရွယ်ထားခြင်းရှိ၊ အမေမလုပ်ခဲ့ဘူး သူမအစဉ်အဆက်ဝတ်ဆင်ခဲ့သည့်တစ်ခုတည်းသောမိတ်ကပ်ပုံမှာနှုတ်ခမ်းနီဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်သည်သူမ၏အသစ်စက်စက်ပြောင်ပြောင်တင်းတင်း ၀ တ်စားဆင်ထားသည့်ရေတပ်ထိပ်တန်းချုပ်ကိုသူမ၏မှုတ်ထုတ်လိုက်သည်ကိုကြည့်လိုက်သည်။ ငါဟာမိန်းကလေးကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့နဲ့ sexy girl လိုရွေးတာကိုဆိုလိုတာလား။ တန်းတူညီမျှသို့မဟုတ် ပို၍ အရေးကြီးသည်မှာယောက်ျားလေးများသည်မည်သည့်အရာကိုလိုချင်ကြသနည်း။
ထို့နောက်လိင်သို့ကျွန်ုပ်၏အစောပိုင်းကြိုးပမ်းမှုများသည်မယုံသင်္ကာဖြစ်ခြင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ကလေးတွေသည်ယခင်ရာစုနှစ်များထက် ၂၀၂၀ တွင်ယခု ပို၍ အသိပေးမှုရှိပါသလား။ အချို့မှာဖြစ်မည်ဖြစ်သော်လည်းလူအများစုမကျန်သေးကြောင်းကိုကျွန်ုပ်ကြောက်ရွံ့ပါသည်၊ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ရုံးဆင်ဆာအဖွဲ့အကြီးအကဲဒေးဗစ်ရှန်းကလူငယ်များနှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများနှင့်ပတ်သက်သည့်နောက်ဆုံးထုတ်သုတေသနပြုချက်ကိုတွေ့ရှိရသည့်အတွက်ကျွန်ုပ်လုံးဝမအံ့သြခဲ့ပါ။ ဒီအရေးကြီးတဲ့လေ့လာမှုကပြသနာတွေကိုကူညီဖို့အတွက်လူငယ်တွေကလူကြီးတွေကိုလူကြီးတွေနဲ့စကားပြောချင်ပေမယ့်အများစုကမိဘတွေနဲ့စကားမပြောကြဘူး၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံတွေကိုကြည့်တဲ့နေရာမှာမကြည့်ရဘူး။ ဒုက်ခနှင့်အရှက်ကွဲခြင်းတို့သည်မိန်းကလေးများအတွက်ယောက်ျားလေးများထက် ပို၍ သာလွန်သောအမြင်ကိုမြေအောက်၌မောင်းနှင်ကွသည်။ သူတို့၏အကြပ်အတည်းသည်ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေဆဲဖြစ်သည်။
သုတေသနပြုချက်အရ porn သည်များပြားလှသည့်ပစ္စည်းများတွင်အလွယ်တကူအလွယ်တကူရောက်ရှိနိုင်သောကြောင့်ကလေးများနှင့်လူငယ်များ (သို့မဟုတ်အနည်းဆုံးသူတို့၏သူငယ်ချင်းများ) သည်လက်လှမ်းမီသောကြောင့်ပုံမှန်ဖြစ်လာသည်။ လူငယ်များက ၄ င်းသည်စစ်မှန်သောလိင်မဟုတ်ကြောင်းကိုသိသော်လည်း ၄ င်းတို့၏အတွေးအခေါ်ကိုပုံသွင်းပေးနေသည် ဟူ၍ ပင်ဖော်ပြခဲ့သည်။ ရွယ်တူချင်းဖိအား၏စွမ်းအားကို ထောက်၍ နက်ရှိုင်းစွာမေးမြန်းထားသောအင်တာဗျူးများအရ၎င်းတို့သည် porn လိင်ဆက်ဆံမှုသည်အမှန်တကယ်လိင်မဟုတ်ဟုဆိုကြသော်လည်းဆယ်ကျော်သက်များသည်သူတို့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များလိုချင်သောအရာဟုထင်သောကြောင့်၊ မျှော်လင့်ထား။ သူတို့သည်လိင်ဆက်ဆံခြင်းနှင့်၎င်းတို့၏လိင်အကြောင်းလေ့လာရန်စိတ်အားထက်သန်ကြောင်း၊ သူတို့၏ကိုယ်ခန္ဓာပတ်လည်တွင်လိင်ဟော်မုန်းများရှိနေသည်ကိုအသိအမှတ်ပြုသည်။ ထို့ကြောင့်ညစ်ညမ်းရုပ်သည်အလွယ်တကူနှိုးဆွခြင်းနှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းအထောက်အကူပြုကိရိယာတစ်ခုဖြစ်လာပြီးပုံမှန်သင်ယူခြင်းနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်လာသည်။
ငါတို့ရဲ့ကလေးတွေကိုလိင်အကြောင်းလေ့လာချင်တာလား။ မည်သည့်ညစ်ညမ်းသောလှုပ်ရှားမှုများပေါ် အခြေခံ၍ ၎င်းတို့၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကြိုက်နှစ်သက်မှုများကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ပြီးနားလည်သနည်း။ ကျွန်ုပ်၏ဖြေကြားချက်နှင့်ကျွန်ုပ်၏လူ ဦး ရေအများစုသည်မျှော်လင့်ချက်မရှိသောအသံဖြစ်သည်။
စီးပွားဖြစ်အခြေပြုသည့်လှုံ့ဆော်မှုတစ်ခုဖြင့်မည်သည့်ဗီဒီယိုမှမဆိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်လက်တွဲဖော်လိင်ဆက်ဆံခြင်းအတွက်ဤမျှလောက်များပြားသောအရာများမရှိပါ။ ပညာရှင်ပီသစွာငါရင်းနှီးသောဆက်ဆံရေးနှင့်ပတ်သက်။ အလွန်အရေးကြီးသောကျွမ်းကျင်မှုကင်းမဲ့သောစုံတွဲများနှင့်သူတို့၏ကိုယ်ခန္ဓာနှင့်“ စွမ်းဆောင်ရည်” နှင့်ပတ်သက်ပြီးမကောင်းသောသူများများအွန်လိုင်းမြင်တွေ့ခဲ့ရသည်နှင့်မတူသည်ကိုတွေ့မြင်ခဲ့ရသည်။ ထို့အပြင်အပြာစာပေရုပ်ပုံများသည်သီးခြား“ လုပ်နေခြင်း” ကိုပုံဖော်သည်။ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ် ဦး ကိုအသုံးပြုပြီးသူတို့ကိုဂရုစိုက်ခြင်းထက် ထိခိုက်နစ်နာစေသည့်၊ ကြမ်းတမ်းသောအပြုအမူများကိုပင်လျှင်သတင်းပို့သည်၊ ၎င်းသည်တစ်ခါတစ်ရံမှကောက်ယူခြင်းနှင့်ထိရောက်စွာကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခြင်းမရှိသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုအစောပိုင်းထိတွေ့ခြင်းမှသင်ယူခြင်းကိုနမူနာယူလေ့ရှိသည်။
စုံတွဲများစွာသည်အမြင်အာရုံကိုလှုံ့ဆော်မှုမှလျင်မြန်စွာနှိုးဆွခြင်းနှင့်အော်ဂဇင်ကိုဖြစ်ပေါ်စေခြင်းမှဖြစ်ပေါ်လာသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာပြproblemsနာများကိုဖြေရှင်းရန်ကူညီပေးခဲ့သည်၊ တစ် ဦး ချင်းအားနှိုးဆွခြင်းသို့မဟုတ်သူတို့၏လိင်ဆက်ဆံမှုဆိုင်ရာလိင်ဆိုင်ရာအော်ဂဇင်ကိုမရောက်ရှိခြင်းကိုကူညီသည်။ ခေတ်ရေစီးကြောင်းနှင့်ပတ်သက်သောကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်အမြင်မှာအစားအစာနှင့်အရက်နှင့်ဆင်တူသည်၊ ၎င်းသည်သင်မည်မျှအသုံးပြုသည်ထက်ထုတ်ကုန်မဟုတ်ပါ၊ ဤအမျိုးအစားသုံးမျိုးတွင်ထုတ်ကုန်အချို့ရှိသော်လည်း၊ အခြားသူများထက်ပိုမိုကောင်းမွန်စေပါသည်။ ဆယ်စုနှစ်သုံးခုကြာအတွေ့အကြုံရှိသောကျွန်ုပ်၏ကောက်ချက်သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသည်ဆရာကောင်းမဟုတ်ချေ။
ညစ်ညမ်းမှုနှင့် ပတ်သက်၍ မိဘဆွေးနွေးမှုကိုယေဘုယျအားဖြင့်အခြေခံလိင်ပညာရေးပြီးနောက်လာရောက်ရန်အကြံပြုသည်။ များသောအားဖြင့်၎င်းသည်လိင်ဆက်ဆံမှုဟောပြောချက်ဟုရည်ညွှန်းလေ့ရှိသည်။ ကျနော့်အမြင်ကတော့သိပ်နောက်ကျလွန်းရုံသာမကတစ် ဦး တည်းသော“ ဟောပြောချက်” အတွက်ရည်ရွယ်ခြင်းသည်လိုအပ်သောအရာများကိုအလေးအနက်လျှော့တွက်ခြင်းဖြစ်သည်။
အကောင်းဆုံးနှင့်သိသာထင်ရှားသည့်ရှေ့ဆက်နည်းမှာကျွန်ုပ်တို့သည်လိင်ပညာရေးကိုမွေးဖွားချိန် မှစ၍ ထည့်သွင်းခြင်းဖြစ်သည်။ လူတစ် ဦး ၏ကိုယ်ခန္ဓာနှင့်စပ်လျဉ်း။ သိလိုစိတ်သည်ကျန်းမာပြီးပင်ကိုယ်စွမ်းအင်ဖြစ်သည်။ မွေးကင်းစကလေး၏မျက်နှာကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်သူတို့၏လက်များကိုသူတို့ရှေ့တွင်လှည့်ကြည့်ခြင်းကသူတို့၏ထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင်ရှိသည်ကိုသူတို့တွေ့ရှိသောအခါသူတို့ကြည့်ရှုပါ။ ၎င်းတို့သည်သူတို့၏အသည်းကိုဆေးကြောသန့်စင်ရန်အင်တိုက်အားတိုက်လုပ်ဆောင်နေသောကြောင့်၎င်းတို့အားအနားပတ်ပတ်လည်ကိုပြန်လည်ထုတ်ယူရန်ကြိုးစားလျှင်သူတို့၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုသတိပြုပါ။ ရေချိုးချိန်နှင့်ဆေးထည့်ခြင်းသည်ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းများကိုအမည်ပေးရန်အလွန်ကောင်းသည့်အခွင့်အရေးဖြစ်သည်။ မိဘများကသူတို့၏အလောင်းများနှင့်သိချင်စိတ်များသည် OK ဖြစ်သည်ဟူသောမိဘ၏သတင်းစကားကိုလက်ခံရရှိသောကလေးများသည်မိဘများအားသူတို့သိချင်သည့်အရာကိုလမ်းညွှန်လိမ့်မည်။ အချို့ကမေးခွန်းများမေးခြင်း၊ အခြားသူများစူးစမ်းလေ့လာခြင်း၊
“ သီးသန့်အစိတ်အပိုင်းများ” အကြောင်းပြောဆိုရန်အဆင်မပြေဟုခံစားရသောမည်သည့်မိဘမဆိုစိတ်ချပါ၊ ကြောင်းအလေ့အကျင့်နှင့်အတူတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်။ ကျွန်ုပ်၏အကြံပေးဆုံးမခြင်းကာလ၌“ လိင်တံ” သို့မဟုတ်“ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း” ဟူသောစကားလုံးများကိုပြောသောအခါစကားထွေးလေ့ရှိသည်။ ငါယောက်ျားလေးနှင့်အတူလိင်ကွဲလိင်ကွဲအမျိုးသမီးတစ် ဦး အဖြစ်ပင်ထိုကဲ့သို့သောစကားများပြောနေရန်မဟုတ်ခဲ့! ဤအကြောင်းအရာကိုကျွန်ုပ်ရေးသားစဉ်ကကျွန်ုပ်သည် clitoris, vulva, vagina လိင်အင်္ဂါဟုပြောဆိုခြင်းနှင့်ပိုမိုရင်းနှီးကျွမ်းဝင်မှုရှိသလား။ ကျွန်တော်သံသယဖြစ်နေတယ်။ အခုတော့ကုမ္ပဏီတခုမှာဒီစကားလုံးကငါ့လျှာကိုအလွယ်တကူရှင်းပစ်လိုက်ပြီဆိုတာသေချာပြီ။
သူတို့ကြီးပြင်းလာသည်နှင့်အမျှကလေးသူငယ်များအား privacy၊ လေးစားမှု၊ ဤစကားစမြည်ပြောဆိုမှုများသည်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကိုစောင့်စရာမလိုဘဲမနေသင့်ပါ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုအကြောင်းပြောဆိုရန်အချိန်တန်သောအခါအုတ်ဂူပြုလုပ်ပြီးသောအခါ၊ သဘောတရားများသည်အကျွမ်းတဝင်ရှိပြီး၎င်းတို့ကိုအသုံးပြုရန်ဆက်သွယ်ရေးနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုလမ်းကြောင်းများအားလုံးကောင်းမွန်စွာတည်ဆောက်ထားပြီဖြစ်သည်။ သင်သည်မည်သည့်မေးခွန်းများနှင့်စိုးရိမ်မှုများအတွက်မဆိုလုံခြုံစိတ်ချရသောလူတစ် ဦး ဖြစ်လာပြီးညစ်ညမ်းစာတတ်မြောက်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်တန်ဖိုးနှင့်အသိပညာဗဟုသုတလည်းရှိသည်။ ညစ်ညမ်းမှုနှင့်ဆက်စပ်သောကိရိယာများ၊ သတင်းအချက်အလက်များနှင့် ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးရန်အဖိုးတန်လမ်းညွှန်များရှိသည် classifiedoffice.govt.nz ဤခေါင်းစဉ်အပေါ်သုတေသနအပေါ်အသေးစိတ်အစီရင်ခံစာများနှင့်အတူ။
ဟုတ်ပါတယ်၊ သင့်ကလေးများကြီးပြင်းလာတဲ့နှစ်တစ်လျှောက်လုံးမှာသင်လုပ်တဲ့ပုံစံဟာသင်ပြောတာထက်ပိုပြီးအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိလိမ့်မယ်။ သင်၏whānauတွင်ပွင့်လင်းသောဆွေးနွေးမှုယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုကိုဖန်တီးသောအခါ၊ တစ်ခါတစ်ရံသင်၏လူငယ်များကိုသင်ပေးလိုသောအမြင်များနှင့်အလွန်ကွဲပြားခြားနားသောအမြင်များကိုသင်ကြားရလိမ့်မည်။ အကယ်၍ သင်သည်သူတို့၏အယူအဆများကိုစိတ်မ ၀ င်စားဘဲလေးစားမှုမရှိပါကသူတို့သည်သင်၏စကားကိုနားထောင်ပြီးအဘယ်ကြောင့်ထည့်စဉ်းစားရမည်နည်း။ အကယ်၍ သင်သည်သူတို့၏ယုံကြည်ချက်များသို့မဟုတ်ရွေးချယ်မှုအချို့ကိုရှုတ်ချပါကသူတို့မြင်တွေ့ခဲ့ရသည်သို့မဟုတ်တွေ့ကြုံခဲ့ရသောအရာများကြောင့်ရှုပ်ထွေးခြင်းသို့မဟုတ်စိတ်ရှုပ်ထွေးခြင်းများရှိပါကသူတို့ထံသင်အဘယ်ကြောင့်လာမည်နည်း။ အရှက်ကွဲခြင်းကိုရှောင်ရှားရန်စိုးရိမ်ပူပန်မှုကိုဖော်ပြရန်နည်းလမ်းများရှိသည်။
မိဘများသည်မိမိတို့၏ကလေးများအားသူတို့၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအမှတ်အသားနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချမှုကိုတိုးပွားစေရန်ကူညီခြင်းဖြင့်တန်ဖိုးရှိစွာကူညီနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကျောင်းများသည်ငယ်စဉ်ကလေးဘဝ မှစ၍ အလယ်တန်းကျောင်းပြီးချိန်အထိတစ်နှစ်လျှင် ၁၂ နာရီမှ ၁၅ နာရီအထိလိင်ပညာရေးကိုပေးအပ်ရန်တာဝန်ရှိသည်။ ၀ မ်းနည်းစရာကောင်းတာကဒီပညာရေးအဆင့်အတန်းကနည်းနည်းလေးပဲဖြစ်နေတယ်။ ဒါပေမယ့်ငါတို့ဆရာမအားလုံးကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအချက်အလက်တွေကိုသူတို့ရဲ့သင်ခန်းစာတွေထဲမှာထည့်သွင်းဖို့လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးပြီးတဲ့အခါ၊ လူငယ်တွေအားလုံးကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့အပြန်အလှန်နားလည်မှုရှိအောင်ကူညီဖို့နောက်ထပ်ခြေလှမ်းတစ်ခုဖြစ်လာလိမ့်မယ်။ အချို့သောအခြေခံသဘောတရားများ၏။ ထို့နောက်သူတို့မိဘများဖြစ်လာကြသောအခါ၎င်းတို့သည်လုပ်ငန်းအတွက်အရင်းအမြစ်များရရှိသည်။ ကျွန်မတို့အတူတကွကျွန်ုပ်တို့သည်ကလေးများအားသူတို့၏ဘ ၀ တစ်လျောက်လိင်နှင့်လိင်အကြောင်းသူတို့ရှာဖွေတွေ့ရှိသမျှအတွက်ပြင်ဆင်နိုင်ကြောင်းကျွန်ုပ်အမှန်တကယ်ယုံကြည်ပါသည်။
ဝမ်းနည်းစွာနဲ့, ငါသတိပေးမှတ်စုအပေါ်အဆုံးသတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ညစ်ညမ်းမှုနှင့်ထိတွေ့မှုမရှိသောကလေးများသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှုနှင့်တူညီကြသည်။ ၎င်းတို့သည်အထက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူလိင်ဆက်ဆံခြင်းဆိုင်ရာပြproblemsနာများအတွက်စိတ်ဒဏ်ရာအားလုံးနှင့်အလားအလာအားလုံးနှင့်အတူစိတ်သောကရောက်နေသည် (သို့) သူတို့မြင်သောအရာများကြောင့်ပင်လုံးလုံးလျားလျားလွှမ်းမိုးသွားနိုင်သည်။ မိဘများနှင့်လိင်မှုကိစ္စဆိုင်ရာကိစ္စများကိုဆွေးနွေးရန်အသုံးပြုလေ့ရှိသောကလေးများသည်မည်သည့်ထိတွေ့မှုမျိုးကိုမဆိုသူတို့ပိုမိုသိရှိရန်နှင့်သူတို့၏တုံ့ပြန်မှုကိုဖြေရှင်းရန်နှင့်လိုအပ်သောအကူအညီကိုရယူရန်ပိုဖြစ်နိုင်သည်။ ကလေးများနှင့်လူငယ်များကိုကာကွယ်ရန်စိတ်အားထက်သန်သောမိဘများ / whānauနှင့်အခြားစောင့်ရှောက်သူများသည်ငါအသက်သွင်းထားသောအုပ်စုတစ်ခုစီ၏ပုံမှန်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏အကျဉ်းချုပ်ကိုဖတ်နိုင်ပြီးလိင်မှုဆိုင်ရာအပြုအမူများနှင့်မည်သည့်အရေးယူမှုကိုကျွန်ုပ်တည်းဖြတ်သောစာအုပ်တွင်ဖတ်နိုင်သည် ကလေးများအတွက်အခမဲ့။ ဤရွေ့ကားနိုင်ငံတကာကျွမ်းကျင်သူကတီထွင်ခဲ့ကြသည် Toni Cavanagh ဂျွန်ဆင်.
ထိုစာအုပ်ကိုပြုစုနေစဉ်၊ စိတ်ပညာရှင်တစ် ဦး အနေဖြင့်နှင့်ကျွန်ုပ်၏ဘဝ၌ကျွန်ုပ်၏လက်တွေ့ဘ ၀ တွင်တူညီသောသတင်းစကားကိုရှင်းလင်းစွာထပ်ခါထပ်ခါပေါ်ထွက်လာသည်။ ပွင့်လင်းမှုနှင့်ရိုးသားမှုသည်ဆက်ဆံရေးအားလုံး၊ အထူးသဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ကလေးများ၊ အကယ်၍ သင်သည်သင်၏နေအိမ်အားလုံခြုံစိတ်ချရသောနေရာတစ်ခုဖြစ်စေပါကကလေးများသည်သူတို့မြင်တွေ့ခဲ့ရာများကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းနှင့်အရှက်ကွဲခြင်းမရှိဘဲဆွေးနွေးနိုင်ခြင်းရှိလျှင်၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၏ရှုထောင့်များသည်သူတို့၏စွမ်းအားကိုဆုံးရှုံးသွားလိမ့်မည်။
Robyn Salisbury သည်လက်တွေ့စိတ်ပညာရှင်ဖြစ်ပြီးပုံမှန်တနင်္ဂနွေနေ့မဂ္ဂဇင်း၏ဆောင်းပါးရှင်နှင့်အယ်ဒီတာဖြစ်သည် ကလေးများအားအခမဲ့ - Aotearoa / NZ တွင်ကလေးများအားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှုတားဆီးခြင်း.